ikhaya/11 Windows/Windows 11: Ukusetyenziswa kwebhetri kubonisiwe usetyenziso ngalunye
Vangelis24. Juni 2021
Ngaphantsi kweWindows 11 ungabonisa ukusetyenziswa kwebhetri (ukusetyenziswa kwebhetri) kwesicelo esifakelweyo. Eli nqaku libaluleke kakhulu kubo bonke abasebenzisi beelaptop ukuba bajonge kwaye bafumanise ukuba loluphi usetyenziso oludlayo ukuba lingakanani amandla. Oku kukunika isishwankathelo sokusetyenziswa kwesicelo sakho kunye nokusetyenziswa kwebhetri.
IWindows 11: ukusetyenziswa kwebhetri
Ukuba ufake iWindows 11 kwilaptop yakho kunye accumulator Ukukhupha ngokukhawuleza, kufanelekile ukujonga imisebenzi yokusetyenziswa kwebhetri. Ke unokufumana ngokulula ukuba loluphi usetyenziso olurhola umbane kunye norhwebo Yandisa inkqubo yebhetri yenkqubo yakho.
Ulujonga njani usetyenziso lwebhetri yesicelo Windows 11
Ukufumanisa ukuba zeziphi izicelo ezisebenzisa amandla amaninzi kwinkqubo yakho, landela isikhokelo sethu.
Qala iiWindows 11 Useto. Kungcono ukusebenzisa indibaniselwano yesitshixo Iifestile + i.
Emva koko cofa apha "Inkqubo".
Kwiwindow evuliweyo cofa kwicala lasekhohlo "Ipakethi yebhetri".
Zonke iiapps ezifakiweyo zidweliswe kwicala lasekunene lefestile. Apha ungajonga ukusetyenziswa kwebhetri kwi-app.
Unokubonisa ukusetyenziswa kwebhetri yesicelo ngaphezulu kwexesha elithile. Ngeeyure ezingama-24 okanye iveki enye.
Lenovo (15,6 intshi HD +) notebook (AMD [Ryzen-Core] 3020e 2x2.6 GHz, 8GB DDR4, 512 GB SSD, Radeon RX, ... Okwangoku akukho zibuyekezo 366,00 yeEUR Thenga it e-Amazon
Windows 11 yabaqalayo kunye nabo batshintshayo: Inkqubo entsha yokusebenza esuka kuMicrosoft yabaqalayo kunye ... 9 ukalisho 12,95 yeEUR Thenga it e-Amazon
Windows 10 Ikhaya 64 Bit / 32 Bit-USB Flash Drive-German -Inkqubo esebenzayo Windows 10 uguqulelo olupheleleyo Okwangoku akukho zibuyekezo 99,00 yeEUR Thenga it e-Amazon
Ukusetyenziswa kwebhetri Ukusetyenziswa kwebhetri 11 Windows